အနုပညာအိမ်လေး: ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ၂၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်း၊ ဓာတ်ပုံများ..
ကိုယ့် ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ရခို င်ပြည်သူတွေဘဝ
(မင်းဂံတရွာလုံးဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်များ ပင်မစခန်း)
ယနေ့ စစ်တွေကို ဘူးသီးတောင် ရသေ့တောင်က ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေ ထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်လို့ ဒီမိုဝေယံ သတင်းထောက်က ပေးပို့ပါတယ်......။ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ဒေသမှာ မနေရဲကြလို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာကြတာပါ။
ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေး စိုက်ထုတ်ပြီး ဒီမိုဝေယံနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေ ၂ဦး သတင်း ဓာတ်ပုံတွေအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်..။ တတ်နိုင်သလောက်လည်း ရခိုင်ပြည်သူတွေကို ကူညီကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်..။ အောက်မှာ မြန်မာပြည်၊ စင်ကာပူနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာ လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ နေရာတွေကို ရှာဖွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများအတွင်း အသက် အိုးအိမ် ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှူ့ဆိုင်ရာ အလှူငွေများအား ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြစေရန်အတွက် သဒ္ဒါတရားနည်းများမဆို ပါဝင်လှူဒန်းလိုသော မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆက်သွယ်၍လှူဒန်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည် ... ။ ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်)ရုံးချုပ် အမှတ်-၄၈၁၊ဒု-ထပ် ၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း(တာမွေအခွန်လွတ်ဈေးအနီး၊ ကျိုက္ကဆံအိမ်ယာရှေ့) ၊တာမွေကြီး(ခ) ရပ်ကွက်တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။့phone-01430172 email: rta.program@gmail.com ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ အမှတ် (၃၄)၊ ၄ - လွှာ (ဝဲ) ၊ မလွှကုန်းလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်းအရှေ့ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။့ရတပ ဗဟို (ရန်ကုန်) - 0973044927 ဦးသာထွန်းလှ (အတွင်းရေးမှူး) - 098532116 ဦးမြင့်နိုင် (ဘဏ္ဍာရေးမှူး) - 095105804 ဦးဇော်အေးမောင်(ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး) - 095140407 ဦးကျော်သန်းလှိုင်(ဗဟိုကော်မတီ) - 0973044927 ဦးအေးမောင်(ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ) - 0943043035 ဦးဦးသန်းရွှေ (ရန်ကုန်တိုင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ) - 095093440
ရခိုင်အသင်း(စင်္ကာပူ) ကျော်သူစိုး . - 8337 3123 သီဟမောင်မောင် - 9003 5845 လှလွန်းဆွေ - 9230 0580 ဂျပန်မှာ လှူဒါန်းလိုလျှင် (ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ ရခိုင်ရောက် ဂျပန်တိုင်းရင်းသားများ)
ကိုညီညီစံ ၀၉၀-၄၁၇၃-၁၁၄၀ ကိုအလုံး ၀၈၀-၃၅၀၀-၉၃၇၅ ကိုကျော်သန်းလှိုင် ၀၉၀-၄၂၉၆-၃၄၉၀
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့က ဂူတောင်ကျေးရွာသား ၁၀ဦးသေဆုံး ခဲ့ရမှုတွင် အဓိက ဦးဆောင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ဘင်္ဂလီ(၂)ဦးအား ယနေ့ စစ်တွေသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ်။
အဆိုပါနေ့က အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်မှာ အနောက်ပြင် ဘင်္ဂလီရွာမှ နယ်မြေခံစစ်တပ်အား ဦးအောင် တိုင်တန်း... အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး စစ်တပ်ရောက်ရှိ မလာမှီမှာ ကျေးရွာအတွင်းမှ ဘင်္ဂလီများမှ မိမိတို့ နေအိမ်အချို့ အား ပြန်လည် မီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပြီး ရခိုင်လူမျိုးများမှ လာရောက် ဖျက်ဆီးသယောင် ကြိုတင် ဖန်တီး ထားခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်..။ အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ၁နာရီခန့်မှာ စစ်တပ်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်..။
ဂူတောင်ချေ ကျေးရွာဖြစ်စဉ် အပြည့်အစုံကိုတော့ အောက်မှာ 7Days Journal သတင်းပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။7Day News Journal ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ဂူတောင် ချေကျေးရွာသို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ခဲ့သည့် အနောက်ပြင်ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ခန့်အနက် ၂၂ ဦးအား လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက ဖမ်း ဆီးရမိထားပြီးဖြစ်ပြီး ကျန်သူများ ကိုလည်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ရောက်7Day သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဇွန်လ ၁၉ ရက်က ဂူတောင်ချေကျေးရွာသို့ ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ခန့်မှ အိမ်များကို လာရောက် မီးရှို့ ခဲ့သည့်အတွက် ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများမှ မီးရှိုသည့် အကြမ်းဖက်သမားများအား လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ လယ်ကွင်း များအတွင်း ပုလင်းကွဲများ၊ တွင်းများတူးထားပြီး ထောင်ချောက်များ ဆင် ထားသည့်အတွက် ရခိုင်လူမျိုးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ဘင်္ဂါလီကျေးရွာများအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ သတ်ပစ်ကြောင်း ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂူတောင်ချေကျေးရွာမှ ကိုဝင်းချေကပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ဘင်္ဂါလီများဘက်မှ တူးမီးသေနတ်များကိုပါ အသုံးပြုသည်ဟုသိရပြီး တူးမီးသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူများမှ ရသေ့တောင်ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် မြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ဆရာတော် ၄၃ ပါး၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မတော် သားများ၊ မြို့မိ၊ မြို့ဖများ ဂူတောင်မြောက်ကျောင်းတွင် စည်းဝေးခဲ့ကြပြီး အလောင်းများကို ပြန်လည်တောင်းခံရာ ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် အလောင်းသုံးလောင်းကို ဘင်္ဂါလီများက ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ညလုံးပေါက် တောင်းဆိုရာမှ စုစုပေါင်းအလောင်း ၁၀ လောင်းကို ရရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိ ၁၀ လောင်းသာ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့ သင်္ဂြိုဟ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း ကျန်သည့် ၁ လောင်း ရမှ သင်္ဂြိုဟ်ရန် ဒေသခံများက ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ဘင်္ဂါလီများဘက်မှ ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပဋိပက္ခကြောင့် စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးနှင့် ကူညီရေးအဖွဲ့မှ ဦးသိန်းမောင်က 7Day News သို့ပြောသည်။ သံတော်လီ ဘင်္ဂလီကျေးရွာ အနီးမှ ရခိုင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတခု..။ ယခုအခါမှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းအား စွန့်ခွာထားခဲ့ ရလေပြီ...
ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့က သံတော်လီ ဘင်္ဂလီကျေးရွာအား ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး အကြမ်းဖက်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီ (၃)ဦးအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ်.
ဇွန်လ ၁၁ရက်နေ့က ဗျိုင်းဖြူရွာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ သတ်ဖြတ်ခံရမှုတွင် ရခိုင်လူမျိုး ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်...။ ဇွနfလ ၂၃ရက်နေ့က အဆိုပါ သံတော်လီကျေးရွာအား လုံခြုံရေးတပ်များမှ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ၌ ပါဝင်ခဲ့ သူများထဲမှ ဘင်္ဂလီ (၃)ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ ဒီမိုဝေယံ သတင်းထောက် ပေးပို့သည်..။
TUESDAY, JUNE 26, 2012 သတင်းဒီမိုဝေယံTUESDAY, JUNE 26, 2012 Posted by